Unogona kundiratidza ini tsvakurudzo yeEnglish yekutsvaga kwekutengesa?
Kunyange nechinangwa chakakosha, zvinenge zvisingakwanisi kutanga kutonga nzvimbo iyoyo yakawanda pamusika kuAmazon. Ndinoreva kuti chigadzirwa chacho pachako uye kuwandisa kwako hakugone kukubatsira kukunda makwikwi aya, kunze kwekuti iwe uchitarisa mutengo wakatarwa wekutarisa uye nguva dzose gara wakagadzirira chero kuchinja kupi zvako kana kugadziriswa kwetengo kunotorwa nevakwikwidzi vako, somuenzaniso kana uchishambadzira mushandirapamwe kune zvinhu zvinotyisa. Pano ndipo paunenge uchinyatsodikanwa neAsia inoshandiswa tsvakurudzo yekutsvaga mutengo uye nguva dzose ramba uchivandudzwa nemazano, uyewo maziso uye zviziviso. Heano zvimwe zvishandiso zvakanaka chaizvo uye inowanikwa muIndaneti kugadzirisa nyaya yekutengesa kweudhon-kutumira webshop kamwe chete - cheap vps hosting 1$.
Icho chisarudzo chakanaka kune mutengesi wese wekutengesa uye kunyange vadzidzisi vekudhinda. Inogona kushandiswa kuAmazon sechishandiso chekutsvakurudza kwakadzama kwekutengesa uye chinangwa chekutengeswa kwemutengo kugadzirwa. Taura zviri nyore, chigadzirwa ichi chinoita kuti zvinhu zvive nyore - zvinogona kukubatsira kuti uratidze mutemo wakakodzera wekutengesa kuti uve wekutengesa kutengesa, uye kukuchengetedza marita ane utano panguva yakafanana. Mutengesi Logic inogonawo kuva nheyo yakasimba yezvinhu zvinotevera mazano ekutengesa maAmerica, akadai seBhoti Rokutenga, Nzvimbo, Kutengesa, uyewo Nzira Yakakosha yekutengesa kupikisa vashori vako vepedyo kupfuura iyo.
Rimwe shanduro yekutsvaga yeAmazoni inogona kushandiswa pakutsvakurudza kwekutengesa kuti ugadzire hurongwa hwako hukuru hunoshandiswa nenzira inenge ichitenderera. Ipa simba rako nekuzvinyora repricing patterns uye kutonga nzvimbo yakakwikwidzana yakawanda kuAmazambique ine ruzivo rwakakosha pamatengo anotengesa. Pano panewo mukana wepamberi-platform unouya neAppagle, sezvo chigadziro ichi chinogona kubatsira zvakafanana kune dzimwe nzvimbo dzekutengesa, dzakadai seWalmart.
Keepa inotsigirwa mutengo wekutsvaga uye yekutevera, iyo inosvika anenge gumi nemaviri enyika dzakasiyana. Pakati pezvimwe zvinhu zvinokosha, iyi tsvakurudzo yeAmazon neyokucherechedza yakaratidzwa kuva yakakosha zvikuru nekundipa nemapurisa emitengo yakawanda yemitengo, kuregererwa kwematengo kana kuwanikwa kwezviyeuchidzo, data yakawanda yezvakaitika kare inowanika muchekareti yangu, nokukurumidza-chengetedza zvinyorwa zvitsva uye maitiro mukutengesa, pamwe chete nezvakanyatsojeka uye zviri nyore kuenzanisa kuongororwa pamusoro pekubudirira kwevatengesi kuAmazon.
Ichi ndicho chisarudzo chokupedzisira chandinoda kukuratidzira nhasi. RepricerExpress inobatanidza zvakanakisisa zvekutengesa automation kuti ikushandire iwe kuAmazon sechinhu chekutsvaga uye mutengo wekugadzira software - yose mune imwe. Maererano nomusimudziri, sarudzo iyi yakadzika iri kutengesa chete parizvino data kuti ibatsire maikorodzano ako nekusvika muBhokisi reNotoro, uye inogona kukwanisa kutengesa zvigadzirwa zvako kuBhokisi Rokusarudza. Ndakaona zvichibetsera kurova mutengo wematengo evashori vangu nehuwandu hwemari, kuita mutambo wepamutengo pfupi nematengo emarenda emangwana anongoratidzwa nepamusoro vatengesi veAmazon, nekuita zvinhu zviri nyore kuburikidza nekunzvenga pasina chinangwa kune mumwe mushambadzi wekambani somupikisi .